सडक उत्सव धरानवासीको आयोजनामा हुँदैछ, नेतृत्व हामीले गर्दैछौँ
होटल एसोसिएसन अफ धरान
धरानमा बैशाख २८, २९ र ३० गते सडक उत्सव हुँदैछ । होटल एसोसिएसनको आयोजनामा हुन लागेको उत्सवको तयारी र उत्सवको समग्र विषयमा हामीले होटल एसोसिएसन अफ धरानका उपाध्यक्ष कृष्ण पाठकसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
धरान सडक उत्सवको तयारी कस्तो भईरहेको छ ?
हामीले धरान सडक उत्सवको तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौँ । धरानको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र व्यावसायिक आकर्षणका लागि सडक उत्सवलाई भव्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । सोही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ ।
यस पटकको सडक उत्सवका आकर्षणहरू के के हुन् ?
यस पटक हामीले विगतको भन्दा केही नयाँ गर्ने योजना बनाएका छौँ । यस पटक हामीले स्टलहरूमा जातीय खानाका परिकार, वेशभूषादेखि खानपानको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई राखेका छौँ । यस पटक हामीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई मध्यनजर गरेर टुर प्याकेजहरू पनि तयार गरेका छौँ । जसमा हाफ डे, फुल डे तथा वान नाइट प्याकेज बनाएका छौँ । यसमा हामीले धरानभित्रदेखि धरान आसपासका क्षेत्रहरूमा सस्तो दरमा पर्यटकहरूलाई घुमाउन लैजाने छौँ । सडक उत्सवलाई पर्यटकमैत्री बनाउने हाम्रो प्रयास हो ।
सडक उत्सवमा महङ्गो खानेकुरा मात्र हुन्छ भन्छन् नि ?
विगतमा यस्ता गुनासाहरू आएका थिए । यस पटकबाट त्यस्ता गुनासाहरू आउँदैनन् । किनभने हामीले यस पटकबाट स्टलको भाडा पनि घटाएका छौँ भने स्टल सञ्चालकसँग खानेकुराको रेट निर्धारण गरेका छौँ ।
यस पटक कहीँ कतै महङ्गो पर्दैन । विगतमा खानेकुरामात्र हुन्छ भन्ने गुनासो पनि आएको थियो त्यसलाई पनि ध्यान दिएर हामीले यस पटकबाट खानेकुरामा पनि जातीय खानेकुरा, अर्गानिक वस्तुको बिक्री तथा प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम र पर्यटनमैत्री कार्यहरू गरेका छौँ । विगतको भन्दा यस पटकको उत्सव अलि बेग्लै हुनेछ ।
उत्सव अवधिभर कति कारोबार हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
यस पटक हामीले ५० लाख भन्दा माथिको कारोबार हुने विश्वास लिएका छौँ । स्थानीय उत्पादन र सामग्रीहरूको बिक्रीलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण यस पटकको बिक्रीमा उत्साह थपिने विश्वास लिएका छौँ । सडकमा थोरै खर्चमा सामान किन्ने र रमाउने अवसर पनि हो यो ।
सडक उत्सवमा कहाँकहाँबाट स्टलहरू आउँदै छन् ?
काठमाडौं, पोखरा, चितवन, इलाम, ताप्लेजुङलगायतका ठाउँबाट स्थानीय उत्पादनका स्टलहरू आउँदैछन् । त्यसले पनि धरानको सडक उत्सवमा थप आकर्षण थप्ने छ ।
उत्सवमा सहयोग कहाँकहाँबाट पाउनुभएको छ ?
यो कार्यक्रमको आयोजक होटल एसोसिएसन भए पनि यो समग्र धरानवासीको कार्यक्रम हो । हामीले अगुवाइ मात्र गरेका हौँ ।
अहिले हामीलाई प्रवद्र्धनका लागि धरान उपमहानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डले सहकार्य गरिरहेका छन् भने हामीले धरानका उद्योगी, व्यवसायी तथा सचेत नागरिकको सहयोग पाइरहेका छौँ । हामीले आम धरानवासीसँग सडक उत्सवको विषयमा सल्लाह र सुझावको पनि अपेक्षा गरेका छौँ ।
यो सडक उत्सव सबै धरानवासीको तर्फबाट हामीले आयोजना गरेका हौँ । त्यसैले हामी सबैको सक्रिय सहभागिता हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
धरान बाहिरबाट आउने पाहुनाहरूको स्वागतका लागि पनि ३ दिनसम्म उत्सवमा उपस्थित हुने र स्टल भिजिट गर्ने, स्टल सञ्चालकसँग कुराकानी गर्नेजस्ता विषयमा सबैको सक्रिय सहभागिता रहनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।